श्रीमान्ले दिएका अनगिन्ती दुःख:-नायिका मौसमी मल्ल
आर्मी परिवारमा जन्मिएकी हुँ म　। सानैदेखि खेलकुद क्षेत्रमा रुची थियो　। खेलाडी बनेर देशविदेशमा नाम कमाउने सपना देख्थँे　। माध्यमिक तहमा पढ्दै गर्दा एथलेक्टिसको राष्ट्रिय खेलाडी बन्न पनि सफल भएँ　। खेलबाहेक नृत्यमा पनि मेरो राम्रो दक्खल थियो　। तर, हिरोइन बन्ने सपना भने थिएन मेरो　। फिल्मी क्षेत्रमा म मौसमी मल्ल भनेर चिनिए पनि मेरो खास नाम विष्णु ठकुरी हो　। चितवन जिल्लामा अहिले पनि खेलाडी विष्णु ठकुरी भनेर मलाई चिन्ने धेरै छन्　।
म घरको एक्लो सन्तान, बाआमाले दस कक्षामा पढ्दै गर्दा १५ वर्षको उमेरमा नै पोखराको केटासँग बिहे गरिदिनुभयो　। पन्ध्र वर्षकी केटीलाई श्रीमती र बुहारीको जिम्मेवारी’bout के नै थाहा हुन्छ र ? अहिले यस्तो लाग्छ- त्यो बिहे मेरो बालापनको हरण थियो, मेरो हाँसो-खुसीको अपहरण थियो　। स्कुले पोशाकमा सजिएर साथीसँगीसँग हाँसखेल गर्दै स्कुल जानुपर्ने उमेरमा मैले सिन्दूर/पोतेमा बाँधिएर ‘घर’ गरिखानुपर्‍यो　। तर, बाआमाप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन　। उहाँहरूले मेरोे राम्रो नै सोच्नुभएको थियो　।
२०४० सालमा बी.एस. थापाले निर्देशन गरेको ‘कान्छी’ फिल्ममा बच्चाको भूमिकाबाट अभिनय सुरु गरेँ　। त्यसबेला मेरो चार महिनाको छोरो थियो　। राम्रो नृत्य गर्न सक्ने बच्चीका रूपमा मैले चितवनमा परिचय बनाएको थिएँ　। म चितवनबाट बिहे गरेर पोखरा आएको थाहा पाएपछि निर्देशक थापाले मलाई खोजेर त्यस फिल्ममा खेल्ने अवसर दिनुभएको हो　। त्यसबेला मैले परिवारमा निकै संघर्ष गरेरमात्रै फिल्म खेल्न पाएँ　।
काठमाडौँ बस्न थालेको चार वर्षपछि निर शाहले निर्देशन गर्नुभएको पच्चीस वसन्तमा दोस्री नायिकाको रूपमा अभिनय गर्ने अवसर पाएँ　। यसमा अभिनय गरेपछि एकाएक मेरो माग बढ्यो　। मैले ‘भाग्यरेखा’, ‘तिलहरी’, ‘भुमरी’ गरी आधा दर्जन फिल्ममा अभिनय गरेँ　। तर, सिनेमाको पर्दामा जुन भूमिका गरिरहेको हुन्थेँ, वास्तविक जीवनमा पनि म त्यही भूमिकामा थिएँ　। अर्थात्, फिल्ममा शोषणमा परेको पात्रको रोल गरिरहँदा वास्तविक जीवनमा पनि म घरेलुहिंसाबाट पीडित भइरहेकी हुन्थेँ　।
श्रीमान्लाई म र दुईवटा छोराभन्दा अर्कै प्रेमिका प्यारी भइसकेकी थिइन्　। सानातिना कुरामा पनि उनी मलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिन्थे　। ‘बाहरवाली’ सित रंगिन जीवन बिताउन थालेपछि ‘घरवाली’ को अनुहार देख्यो कि रिस उठ्दोरहेछ श्रीमान्हरूलाई　। मेरो श्रीमान् बाहरवालीको प्रेममा पागलनै भएका थिए　। उनलाई मेरो चिन्ता त छँदै थिएन, दुई जना अबोध छोराहरूका पनि वास्ता गर्दैन थिए　। श्रीमान्बाट भनिसाध्य नहुने पीडा पाएँ, तर पनि कसैलाई भन्न सकिनँ　। सर्वसाधारण महिला भएको भए श्रीमान्ले कुट्यो भन्दै हिँड्न सजिलो हुन्थ्यो होला　। तर, फिल्मजगतकी एउटी स्थापित नायिकाले त्यसरी भन्दै हिँड्न कहाँ सक्थी र ? स्टार हुनु भनेको धेरै बन्धन र अप्ठ्यारामा पर्नु हो　। भित्र हजार पीडा र दुःख सहनु परे पनि बाहिर खुसीको नाटक गरेर हिँड्नु पर्ने बाध्यता थियो　। फिल्मी-जिन्दगी बाँचेर फिल्म खेलिरहँे　।
अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका लागि उभिएको त्यो क्षण मेरो जीवनको सबभन्दा सुखद् र दुखद् क्षण थियो　। सुखद्- ’cause म श्रीमान्का प्रताडनाबाट मुक्त हुँदै थिएँ　। र दुखद् यसअर्थमा कि अब मैले समाजका अनेक प्रश्नका सामना गर्नुपथ्र्याे　। तर, श्रीमानसँग रहँदा पाएका दुःखका कारण उसबाट टाढिनु मेरा लागि पीडाको विषय भएन, अलिकति पनि भएन　।
मैले श्रीमान्सँग नौ वर्ष बिताएको थिएँ　। यस अवधिमा एउटी श्रीमतीले श्रीमान्बाट पाउने मायाको खासै अनुभव गर्न पाइनँ　। बरु, ‘म लोग्ने हुँ’ भन्ने दम्भपूर्ण र विकारग्रस्त मनोविज्ञान भएको पतिदेव भनाउँदाहरूबाट श्रीमतीहरू कति पीडित हुन्छन्, त्यसको प्रशस्त अनुभव गर्न पाएँ　।
तर, सम्बन्धविच्छेदपछि पनि मैले पीडा र प्रताडनाको शृंखलाबाट मुक्ति पाइनँ　। श्रीमान्सँग रहँदा उसबाट प्रताडित भएँ, श्रीमान्बाट छुट्टएिपछि समाजबाट प्रताडित भएँ　। पीडा दिने मामिलामा सिंगो समाज कुनै ‘टिपिकल लोग्ने’ भन्दा कम रहेनछ　।
श्रीमान्सँग छुटेपछि समाज र आफन्तका मलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आयो, आमूल परिवर्तन भनेजस्तो ! ‘कसैसँग सल्किएकी थिई होला, र त लोग्नेले छाड्दयो’ भन्न थालेका थिए मान्छेहरू　। तर, ‘त्यसको लोग्ने अर्कीसँग सल्केकाले उसले त्यसलाई छाडिदिई’ भन्ने कोही भएनन्　।
सम्बन्धविच्छेदपछि फिल्मीक्षेत्रबाट लामो समय हराएँ म　। एक हिसाबले पलायन भएँ भने हुन्छ　। तर, सबै कुरा मिलाएपछि तेह्र वर्षपछि फिल्म ‘गिरफ्तार’ निर्माण गरेर यस क्षेत्रमा पुनः आएँ　।
मलाई मेरो जीवन पनि फिल्मजस्तै लाग्छ　। महिलाहिंसालाई समेटेर बनाइएका फिल्मका कथा मेरै कथाजस्ता लाग्छन्　। म आफँैले खेलेको ‘तिलहरी’ त झन् मेरै कथाजस्तो लाग्छ　। तिलहरीमा सानै उमेरमा बिहे भएकी एउटी महिलाले श्रीमान्बाट शारीरिक र मानसिक यातना पाएकी छे भने समाजबाट मानसिक यातना　। यसबाहेक मेरो जीवनसँग मेल खाने धेरै फिल्म छन्　।
« जमिमका हत्यारा खोज्दै भ्यालेन्टाइन डे को ’boutमा जानकारी »
Bal bahadur, on फ्रेवुअरी 14, 2010 at 10:00 अपराह्न said:
नमस्कार! वास्तव भन्ने हो भने यस्ता सणेन्त्र धेरै परिवार मा हुन्छ । यस्लाई नै गिन्दगी भनिन्छ । तर मौसमी मल्ल जि को गिन्दगी फिलिमी गिन्दगी जस्तै हो रहिछ । र म भन्न चाहान्छु! मौसमी जि तपाईंको गिन्दगिलाई समेटेर फिल्म बनाउनु भयको फिल्म जरुर सफल हुनिछ । बकी त म बाट केनै सुझाब दिना सक्छु र ? God Bless u and ur family ..हो तपाईं को श्रीमानले सचैन सणेन्त्र गर्नु भयको रैछ ।
saiman, on फ्रेवुअरी 14, 2010 at 11:25 अपराह्न said:
ali badi ni marmik banauna khojey jastoo lagey ko cha